जब यो तपाईंको आफ्नै मालिक बन्न आउँछ, कुन साइट राम्रो छ? Flirtymania वा Patreon?
सफल हुन तपाईलाई हार्वर्ड डिग्री वा माईल लामो पुनःसुरु आवश्यक छैन। तपाईंको प्रतिभा र रचनात्मकता Flirtymania मा भुगतान गर्नेछ। तपाईंको भाषा, उमेर वा प्रतिभा जेसुकै होस्, फ्लर्टम्यानिया तपाईंलाई समर्थन गर्न त्यहाँ छ।
एकल भुक्तान स्रोत जस्तै प्याट्रेनमा टाँसिनुहुन्न।
प्रत्येक सेकेन्ड गणना गर्दछ
प्रत्येक अनलाइन तपाईं स्ट्रिम स्ट्रिम गर्नुहोस्। यदि तपाईंसँग उत्साहित र अन्तर्क्रियात्मक दर्शकहरू छन् भने, अझ अधिक भुक्तानी गर्नुहोस्!
प्रत्येक दर्शक र ग्राहकको साथ, तपाईं सदस्यताको १००% प्राप्त गर्नुहुन्छ!
गोपनीयता भुक्तान गर्दछ
निजी कलहरूमा भाग लिनुहोस् र प्रत्येक मिनेटको साथ एक हत्या गर्नुहोस्!
उपहारका रूपमा धन्यवादलाई ग्रहण गर्नुहोस्
दर्शकहरूलाई १ क्लिकको साथ तपाईंको कामको लागि धन्यवाद दिन ग्यारेन्टी गरिएको छ!
तपाईंको दर्शकहरूले तपाईंलाई तपाईंको प्रत्यक्ष स्ट्रिमहरूमा मद्दत गर्दछ जब तपाईं विचारहरूको बाहिर हुनुहुन्छ! जब तपाईं एक कार्य गर्न तयार हुनुहुन्छ ती सिक्का तपाईंको खातामा प्रवाहित हुनेछन्।
सदस्यता शुल्कमा स्किम्ड नहुनुहोस्
कलाकार उनीहरूले ल्याएको पैसाको योग्य हुन्छन्। फ्लर्टिमानियामा तपाईंले सदस्यता शुल्कको १००% प्राप्त गर्नुहुन्छ!
सदस्यता सदस्यता निश्चित हुने बित्तिकै, तपाइँ भुक्तानी गर्न थाल्नुहुनेछ। कुनै कमीशनहरू छैन, कुनै लुकेका शुल्कहरू छैनन्, केवल उचित भुक्तानी!
तपाईं कसरी नाफा कमाउनुहुनेछ?
प्याट्रियन विपरीत, तपाइँ कमिसनहरू बिना 100% भुक्तानीहरू प्राप्त गर्नुहोस्
एकल सदस्यताबाट प्रति महिना $ 40 सम्मको भुक्तान
तपाइँ तपाइँको स्तर सेटिंग सजिलो साथ स्विच गर्न सक्नुहुन्छ।
लेखकहरूको सन्तुष्टि के हो?
बोनस: अटो-ट्रान्सलेटरसँग कुराकानी गर्नुहोस्!
बोनस: चाँडै केहि क्लिकहरूमा सदस्यता लिनुहोस्!
तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दै, तपाईंलाई १० अलग प्रकारले भुक्तानी गर्न सकिन्छ! जब फ्लर्टिमेनियाले तपाईलाई हरेक विकल्प प्रदान गर्दछ प्याट्रियन जस्ता असुविधाजनक प्लेटफर्महरूमा टाँस्नुहोस्!
किन भुक्तान सदस्यता छनौट गर्ने?
तपाईं गुणवत्ता HD सामग्री प्राप्त गर्नुहोस्
एक आकर्षक विवरण मार्फत जानुहोस्
सजीलै सान्दर्भिक ट्यागहरू फेला पार्नुहोस्
अफलाइन, अनलाइन, र सबै समय
तपाईको सब भन्दा तस्विरहरु राख्नुहोस्, सब भन्दा बढि वर्णन लेख्नुहोस् र निष्क्रिय आयमा र्याकिंग सुरू गर्नुहोस्!
प्रत्येक प्रयोगकर्ताले तपाइँको फोटोहरू हेर्न भुक्तान गर्दछ! प्रत्येक views० दृश्यहरू Flirtymania सेवा द्वारा भुक्तान गरिन्छ।
दृश्यका लागि साझेदारी गर्नुहोस्
तपाईंको सोशल मिडिया, मित्र सर्कल, र पेशेवर नेटवर्कमा फ्लर्टम्यानिया लिंकहरू साझेदारी गर्नुहोस् र हरेक भन्दा पहिले ठूलो श्रोतालाई संलग्न गर्नुहोस्!
फ्लोर्मिमेनियाले तपाइँको स्ट्रिमलाई तपाइँको स्ट्रिम स्ट्रिम गर्न को लागि रचनात्मक स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ! यो एक नयाँ पोशाक, भूमिका-खेल, वा पृष्ठभूमि, रचनात्मक प्राप्त गर्नुहोस्! Flirtymania कुनै पनि बिंदु मा तपाइँको रचनात्मक प्रक्रिया सेन्सर गर्न वा प्रतिबन्धित गर्न कोशिस गर्दैन!
कसरत गर्न समय पाउनु भएको छैन आफैलाई खोज्नुहोस्? काम गरेर सिक्का कमाउन सुरु गर्नुहोस्!
तपाईंको दैनिक जीवनमा दर्शकहरूलाई ल्याउनुहोस्! तिनीहरूलाई वरिपरि देखाउनुहोस्, आफ्नो दर्शकलाई संलग्न गर्नुहोस् र सिक्का कमाउनुहोस् !!
तपाईंको दर्शकहरू र आफैंलाई खानको लागि केन्द्रित प्रत्यक्षप्रवाहहरू मार्फत उपचार गर्नुहोस्!
Flirtymania मा तपाईं केहि क्लिकहरु संग एक लाइभ स्ट्रिम सुरु गर्न सक्नुहुन्छ! कुनै जटिल प्रक्रिया वा चरणहरू छैनन्।
निर्मित स्वत: अनुवादक
शब्दकोश संग संघर्ष नगर्नुहोस्, मात्र स्वत: अनुवाद सबै काम गर्न दिनुहोस्!
Flirtymania एकै पटक मा धेरै उपकरणहरु र साइटहरु बाट स्ट्रिमिंग को स्वतन्त्रता र लक्जरी प्रदान गर्दछ!
भिसा, मास्टरकार्ड, PayPal, Yandex, QIWI, SEPA, Bitsafe सेवाहरू प्रयोग गर्नुहोस् वा एक दिन $ 30 भन्दा माथि पैसा निकाल्न चलानी प्राप्त गर्नुहोस्!
Flirtymania मा तपाईंको आयको १००% पाउनुहोस्।
Flirtymania गोपनीयता को लागी केहि उपयोगकर्ताको आवश्यकता बुझ्दछ। यदि तपाईंसँग गोपनीयताको स्तर संग खुसी हुनुहुन्न भने, सेटिंग्स परिवर्तन गर्नुहोस् स्तर अनुरूप तपाई सबैभन्दा सहज हुनुहुन्छ। Flirtymania मा, तपाईं यथोचित योग्य गोपनीयता प्राप्त गर्न तपाईंले संघर्ष गर्नुपर्दैन।
उत्तम भेस बनाउनुहोस्, एउटा सुन्दर मास्क प्राप्त गर्नुहोस्, र अनौठो उपनाम छनौट गर्नुहोस् र तपाईं सेट हुनुभयो!
हामीलाई विश्वास नगर्नुहोस्, दुई जनालाई आफैंको लागि जाँच गर्नुहोस्! फ्लर्टम्यानियामा विकल्पहरूको सर्वश्रेष्ठ खोज्नुहोस्!